Ntanetị Google Panda algorithm
Echiche m na Google "Panda" Algọridim Change
Monday, March 7, 2011 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Enwere m mmetụta dị iche iche na Google na-eme mgbanwe dị ukwuu na algorithm ya. N'otu aka, enwere m ekele maka na ha na-achọ imeziwanye… ebe ọ bụ na nsonaazụ ọchụchọ Google enweghị afọ ojuju. Tupu taa, m na-achọ ụfọdụ ọnụ ọgụgụ na ịde blọgụ… na nsonaazụ ndị dị egwu:
Ọ bụrụ na ị na-ele anya na nsonaazụ… ma gaa na ibe na ibe, ọ ga-egosi na Google na-etinye obere nlebara anya na saịtị buru ibu ma na-elebara obere saịtị anya. Ihe bụ nsogbu bụ na nsonaazụ m na-achọ bụ ezigbo ihe megidere ya. Mightfọdụ nwere ike ịrụ ụka na Google enweghị ike ịghọta nzube m… abụghị eziokwu. Gugul nwere otutu otutu aho n’akuko n’acho ihe m choro. Akụkọ ahụ ga-eweta ntinye isiokwu m nwere mmasị n'ịchụso.
Nwelite Google na nso nso a, ma ama ya panda melite (akpọrọ onye nrụpụta), ekwesịrị ịkwalite ogo. Nsogbu a, dị ka ọtụtụ ndị SEO si kọwaa, bụ na ọ na-esiri ha ike ịlụ ọgụ ala ubi. Na eziokwu niile, ahụghị m ọtụtụ mkpesa sitere n'aka ndị ọrụ… mana Google pụtara na ọ gafere n'okpuru nrụgide nke ụlọ ọrụ ahụ.
Ọ bụrụ na obere saịtị ọdịnaya enweghị ike ịsọ mpi na saịtị buru ibu, m ghọtara. Ekwesịrị idozi ihe ọ bụla gbochiri ọchịchị onye kwuo uche ya. Ekwetaghị m na Google rụziri nsogbu ahụ n'ezie, n'agbanyeghị. Ọ dị m ka ọ bụ naanị na ha mere mpụta… ịkwụnye otu oghere ka ọgbụgba ndị ọzọ bidoro. Ihe ngbanwe nke algorithm mere ka ihe di nma - nnukwu saịtị di uku na ibe di elu di ka o di mfe karie na ibe ohuru.
The ọzọ mbipụta, n'ezie, bụ ugbu a nnukwu saịtị na n'ezie nwere ọtụtụ nke ogo peeji nke… ma a obere pasent nke crappy peeji nke, ugbu a ama esịn n'usoro gafee osisi. Cheedị itinye ego na saịtị ma wuo ọtụtụ puku peeji nke ọdịnaya dị ukwuu, naanị iji chọpụta na n'abalị na saịtị gị dara ada n'ihi na ị nwekwara ụfọdụ peeji nke na-ata ahụhụ. Ihe ndapụta nke a na-eri ụfọdụ ụlọ ọrụ nnukwu ego.
Nke a blog nwere ihe karịrị 2,500 blog posts. O doro anya na ọ bụghị ha niile bụ klas "A". N'eziokwu, nha nke blọọgụ a anaghị atụnyere ọtụtụ ugbo ọdịnaya nwere ọtụtụ narị puku ma ọ bụ nde akwụkwọ. Otú ọ dị, m ka bụ ugbo… Na-agba mbọ iwulite ogo maka isiokwu dị iche iche dị mkpa maka ọchụchọ, mmekọrịta mmadụ na ibe ya, mkpanaka yana mbọ ahịa ndị ọzọ. Amachaghị m ụdị ọdịnaya m ga - eke tupu a hụ m dị ka ugbo ọdịnaya… ma taa ya ahụhụ… mana enweghị m ezigbo obi ụtọ na ya.
Ihe nzuzo ochie na SEO abụghị ihe nzuzo. Dee ọdịnaya dị mkpa, jiri isiokwu gị rụọ ọrụ nke ọma, hazie peeji gị nke ọma, hazie saịtị gị ka ị nwee ike itinye ọdịnaya ahụ… ma kwalite heck na ya. Irè isiokwu ojiji na pụrụ isi chọta ga-ị na ezigbo nsonaazụ… na nkwalite nke na ọdịnaya anya-saịtị ga-eme ka ị họọrọ mma. Ihe nzuzo ohuru amaghi. Ndị anyị na ụlọ ọrụ ahụ ka na-agbasi mbọ ike ịghọta ihe ọ dị mkpa ka eme. Google hush-hush na ya, yabụ, yabụ anyị ji aka anyị.
Ekwuru eziokwu, enwere m nkụda mmụọ na Google ga-eche na ọ bụ ezi echiche imetụta 12% nke nsonaazụ ọchụchọ niile n'abalị. Enwere ndị ọdachi a dakwasịrị - ụfọdụ n'ime ha bụ ndị ndụmọdụ na-arụsi ọrụ ike na-achọ ndị ahịa ha inye ha ndụmọdụ kachasị mma. Google emeela ka ọ gbanwee ma gbanwee mgbanwe ndị ahụ.
Google jiri aka ike weputa ulo oru SEO na obuna akwalite njikarịcha iji gbalịa imeziwanye nsonaazụ ha. Anyị agbapụghị ya, dịka CNN na-atụ aroAnyị niile mụrụ, zaghachi ma mee ihe na ndụmọdụ enyere. Anyị gbalịsiri ike imejuputa atụmatụ ndị Google jụrụ anyị ka. Anyị kwụrụ ụgwọ ma gaa ihe omume ndị na-amasị mmadụ Matt Cutts gaa n'ihu na-akwalite. Anyị na ndị ahịa buru ibu rụọrọ ọrụ wee nyere ha aka mejupụta ọdịnaya ha n'ụzọ zuru ezu… naanị ugbu a ka ewepụrụ kapeeti n'okpuru anyị. Google rụtụrụ aka na saịtị dịka Wikipedia dịka àgwà saịtị… ma penalized saịtị ebe ọdịnaya n'ezie zụrụ na ndị mmadụ n'ọrụ ide. Gaa ọgụgụ.
Google mere kwesịrị ịgbanwe. Agbanyeghị, ụdị mgbanwe ahụ na enweghị ịdọ aka na ntị ọ bụla na Google enweghị isi. Gini kpatara na Google agaghi ama ndi mmadu buru ibu aka na nti na enwere algorithm nke aga eme n’ime ubochi iri ato nke n’enye ndi nkwuputa ugwo uto maka imeputa akwukwo ha nke oma. Gini mere gharile ngbanwe site na iji nchoputa ma obu sandbox. Opekempe ụlọ ọrụ enwere ike ịkwadebe maka nnukwu ọnụọgụ okporo ụzọ, gbasie mbọ ike n'ịzụ ahịa n'ịntanetị karịa, ma mezie ụfọdụ (ọ dị ezigbo mkpa).
Otu ihe atụ akọwapụtara bụ ndị ahịa m na-arụ ọrụ. Anyị na-ewuworị email ka mma, mkparịta ụka mkpanaka na mmekọrịta mmadụ na ibe ya - yana akuko nzaghachi ebe ndị na - agụ akwụkwọ nwere ike igosipụta ogo ọdịnaya ha na - agụ ka ọ ga - aka mma. Ọ bụrụ na anyị maara na a ga-enwe mmelite algorithm nke ga-ada 40% nke okporo ụzọ saịtị ahụ, anyị ga-arụsi ọrụ ike iji nweta atụmatụ ndị ahụ kama ịnwe n'ihu tweak saịtị ahụ. Ugbu a, anyị na-agba mbọ nwudo.
Etu esi enweta ihe ọ Juụ Linkụ na Youtube
Onweghi ebe mebiri emebi na saịtị ndi oru ugbo. Ọ dịghị onye ahịa m. Ekwenyere m na nke a bụ n'ihi ogo ọdịnaya dị mkpa, mana ogo na ikike nke njikọ na ọdịnaya ahụ ka na-achị ụbọchị ahụ. Ọ dịkwa mkpa karịa ka esiesi metụta mmadụ abụọ.
Gosi m saịtị nke gbadara agbada, m ga-egosi gị oghere na profaịlụ njikọ ahụ ma e jiri ya tụnyere ndị ọzọ na niche nwetara. Ọ na-eme dị ka nke a na mmelite ọ bụla, n'agbanyeghị aha a na-akpọ ya. Saịtị “Nnukwu” apụtaghị sites naanị ikike saịtị ndị na-emeghị ka ọnọdụ ha ka mma. A na-ehichapụkwa saịtị "nnukwu" ọtụtụ, nke ahụ anaghị enyere aka.
Na mgbakwunye, ekwenyere m na algo ndị na-egosi ogo ọdịnaya dị elu ma na-achọ ihe karịrị naanị "okwu ọma na nke mbụ". Enwere ọtụtụ ihe gụnyere asụsụ anabatara nke niche, AP Stylebook echiche, ikpo okwu (blog ma ọ bụ ihe atụ) na akara ọgụgụ.
Saịtị profaịlụ ndị dị elu etinyere aka (ezinearticles, mahalo) bụ ndị ntaramahụhụ ntaramahụhụ. Emere ha ihe nlere anya na ebumnuche iji kpalite uzu. Ndị a bụ mmadụ enyocha na ụmụ mmadụ na-ele mmadụ anya n'ihu… na ihe mere ụfọdụ nke "ezi" saịtị dị ka Cult of Mac nwetara ntughari too Echere m na ndị Mac bụ ndị mpako na mpako na m ga-akụ saịtị banyere Mac kwa. LOL j / k
Ohh Yesss .. Google "Panda" algorithm Change .. http://www.hayatoglunakliyat.com
Sep 5, 2011 na 6: 24 AM